Ku soo biir Logomania sannadka 2018 qaybahaas | Ragga Stylish
Haddii aadan wali aqbalin logomania, 2018 waa wakhti kufiican oo lagu quudiyo. Waana taas, ka fog luminta saameynta, wax walbaa ayaa tilmaamaya sanadka soo socda ayaa sii wadi doona inuu isu muujiyo inuu yahay mid ka mid ah isbedelada ugu muhiimsan.
Kuwa soo socdaa waa shan qaybood oo ku habboon sii taabasho muuqaal ah oo ah logomania muuqaalkaaga sanadka bilaaban doona:
4 Dharka hoose
Mr Porter, 890 XNUMX
Gucci-yada ayaa ah kuwa loogu jecelyahay (waxaa jira dad badan oo caan ah oo aan diidi karin soo jiidashadooda sidoo kale), laakiin Talyaani waa mid ka mid ah shirkado badan oo astaantiisa ku shaabadeeyay dharkan guul weyn. Marka Kaliya waa inaad doorataa nooca aad jeceshahay oo aad u ogolaataa sixirkiisa inuu ku ekaado muuqaalkaaga caadiga ah jiilaalka.
Marka lagu daro bixinta vibes aad u qabow, funaanado calaamadeysan oo saxeex ah ayaa sidoo kale lagu gartaa isweydaarsigooda. Jaakada hoosteeda (bambo, rookar ama denim) waxay ku siin karaan taabasho raaxo leh muuqaalkaaga caadiga ah. Halka hadaad isku darsato blazers-ka iyo jaakadaha cashada ay bixin doonaan taabasho aan caadi aheyn oo casri ah si aad u eegto smart.
Ciyaaraha Fashion, € 85
Gaabinta lugaha surwaalka ayaa la sameeyay anqawyada mid ka mid ah diiradda dareenka. Xaaladdan dhexdeeda, layaab malahan in sharaabaadyo ay ku noolyihiin casrigii dahabiga ahaa. Midabyo adag, daabacan ama astaamo saxeexan (sida kuwan oo kale Balenciaga)… waxaad go'aansataa nooca ugu habboon munaasibad kasta. Fiiri meesha astaanta ku taallo, hooseyso si aad u hubiso in uusan ku daboolneyn surwaalku.
Deenka Bariga, € 20.47
Waad ku mahadsan tahay dharka astaanta, qayb wanaagsan oo ragga ah ayaa qaatay logomania tan iyo muddo dheer ka hor intaanay ahayn isbeddel. Haddii aad had iyo jeer jeceshahay in feeryahannadaada, koobabkaaga iyo fekerka fekerkaaga ay ku jiraan magaca ama astaanta shirkadda dhexda si hab muuqata leh, hadda waxaa jirta sabab kale oo loo sharaddo qaabkan.
Jiinis Tommy ah
Tommy Jeans joggers-ka (iyo dhammaan funaanadaha mawada guud ahaan) ayaa kaa caawin doona sameysid XNUMXs aad u qurux badan iyo muuqaal caadi ah oo casri ah sanadka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Shan qaybood si ay ugu duubtaan Logomania sanadka 2018
Daawooyinka caafimaadka leh ka dib habeen siyaado ah